Kanganwa maketani uye edza imwe yezviya zvekudya panzvimbo iyoyo panzvimbo iyo.
Sacramento iri kumba kune dzimwe nzvimbo dzekutengesa zvetinhe, pamwe chete nevanowakoderedza vanoita mamwe mabhizimusi makuru. Paunenge uchitsvaga chimwe chinhu chakasiyana uye chinonyanya kukodzera, Sacramento "gomba mumadziro" anotengesera zvakasimba kubva pakutanga kusvikira pakupera. Izvi zvivako zviduku zvinonyatsozivikanwa nevakawanda vemuzinda, asi zvinoregererwa nevamwe vanenge vari pamba yekudya zvitsva. Funga kuedza imwe yezvikafu zvinyorwa zviduku nevanoshamwaridzana nevashandi vavo, mazano matsva uye nzvimbo dzinonakidza.
Ngatibvumirane neiyo chinhu chakaoma - bhakoni chinhu chakanaka. Iwe unoda kuuya pamwe chete nechitima chekufunga kana iwe unotarisira kunakidzwa paBacon & Butter inonakidza iri mukatikati meguta. Chinenge chinhu chose chiri muchitoro ichi chiri "chidzokorora" - ivo vanopawo mubhadharo mumabhuku ekare ekunyora. Bhakoni iri pose pose paidya iyi inonaka, iyo inongogadzirirwa brunch.
Kana uchida kudya kwakanaka, edza Grilled Cheese Benedict. Iko yako sandwich yakabikwa inoshandiswa pachallah chingwa, yakagadzirwa nebhekoni neshizi yakanyunguduka pamusoro payo, inoteverwa nemasikirwo emasikati benedict pamusoro pezvo. Inoshandiswa neimba yematata uye haikanganwiki. Zvimwe zvivako zvinosanganisira hove yeharuki, mabhisikiti uye bacon gravy uye aple bacon fritters.
Iyi nzvimbo iduku, asi ine simba. Iwe unorasikirwa kana iwe usina kutarisa - saka ramba uchitarira maziso pakona ye 35 neC in East Sacramento.
Nherera inobatanidza iyo yakasiyana yekubika kubikira kweLatin America, Asia uye tsika dzekugara kumadokero kugungwa s s menu inonakidza chaizvo. Edzai Chikafu Chakanaka Chikafu Tamales kana ve Veggie Sandwich kana iwe uchida chimwe chinhu chiri nyore, chinotengwa uye chinonaka.
Iva nechokwadi kuti uende kuna Orphan mangwanani - kazhinji kazhinji kumirira kwenguva yakareba kumavhiki ekupedzisira - iyi ndeimwe yezvitsuwa zviduku zvikuru maererano nenzvimbo yekugara.
Vhura kutanga pa7am nevhiki, hausi kumbofambisa kare kuti uwane ndiro yezvokudya zvisingakanganwiki zvauchadya paTres Hermanas. Chigadzirwa chavo chekugadzira cilantro kupfeka chinorohwa nevakawanda vevatengi vavo. Edzai Milanesa - sirloin yakaonda, yakagadzirwa nemupunga, nyemba uye mashutu anodziya.
Tres Hermanas ane nzvimbo yakagamuchirwa nemifananidzo yakajeka uye ine nzvimbo yakasununguka yepatio panzvimbo. Yakanga yakatangwa nehanzvadzi nhatu dzinobva kuMexico, uye chaiyo yekuchamhembe kweMexican cuisine inowanikwa pakati pevanhu vekumusha.
Ichi chidoro chekudya chiri chiyeuchidzo chemafirimu emagetsi emhepo - nzvimbo duku mukati medu ine nzvimbo yakawanda yekugara uye kunakidzwa kunze. Menyu yavo iri nyore uye inonaka - edzai bulgogi tacos yakabatanidzwa ne cilantro rice. Kunyanya munguva yezhizha unoona kuti nei vanhu vachida kugara kunze kwekugadzira uku kwakasiyana-siyana kwekuKorea neMexico-America. Unonzwa uchitya? Wana Kimchi quesadilla - iwe unofara kushamiswa kuti kabichi yakanaka inogona sei kuravira mukati me tortilla. Chinhu chose chakakanganiswa nemashizha avo ekupinza kwekunaka kunakidza kusanganiswa.
Zvine mari uye zvingangodaro zvakanakisisa burgers muguta, Squeeze Inn yakawana zita rayo kubva kumakamuri aro akadzika akadzika.
Kuvharwa kwekuvharwa kwekusava ADA kwakabvumirana kwakavatamisa kunzvimbo huru pa Power Inn Road, uye kunewo nzvimbo yeRoseville.
Mabheji avo anozivikanwa nokuda kwe "cheese skirt" yavo - cheese iyo yakawanda kaviri yebhino uye fries kune chinyorwa chendarama kunze kwayo. Vanoshumirawo sandwiches uye imbwa dzinopisa, asi chaizvoizvo-iwe unoda kuedza "Squeeze ne Cheese." Kukwevedza kwechidiki kunowanikwa.
Iyi ichangopfuura mashoma emakona makuru-in-the-mudyoresho ku Sacramento. Kana iwe uri kutsvaga zvakanakisisa kudya kwekudya muGuta reMuguta, usapinda maketani uye unotarisa imwe yeiyi yekusika mabhizinesi emunharaunda.
Tsamba Yezvikoro - Elk Grove Unified School District
Romantic Hotels ku Sacramento
Nzvimbo dzekudya dzakanakisisa dzeMexico ku Sacramento
Heino Ndekupi Kwatinofanira Kuenda Kuti Uwane Kuti Njodzi Dzinoberekwa Sei
Top 5 Boutiques uye Concept Stores muParis
Pamusoro 11 Varimi Misika muDenver
Little Red Riding Hood Nhema
The 15 Essential Dos and Don'ts yeMardi Gras muNew Orleans
15 Muchato Wakawanda Muchato Munharaunda ye Washington DC
Arizona State University Sun Dhiyabhorosi Football
Washington, DC's Restaurants Rumbidzai Cherry Blossoms
Nzvimbo dzepamusoro dzekushanyira kuWest uye Central Africa
6 Zvikonzero Zvokuda Zuva kuMontreal